Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Jaaliyadda Norway oo Galay Maalintii 2aad Guulna ku Dhamaaday
Shirkii Jaaliyadda Norway oo Galay Maalintii 2aad Guulna ku Dhamaaday
Posted by ONA Admin	/ December 21, 2014
Jaaliyada S.Ogadenia ee dalka Norway ayaa shalay uu uga furmay shir balaadhan oo si wayn loo soo agaasimay. Shirka ayaa waxaa ka so qayb galey marti sharaf ka kala socotay Jaaliyadaha Ogadenia ee dalalka Uk , Denmark iyo Sweden iyo sidoo kale dadwayne Somaaliyeed iyo wariyayaal.
Shirka ayaa waxaa lagu furay wacdi diini ah oo lagu soo dhaweeyay mudane Cabdi rahmaan oo halkaasi ka soo jeediyay wacdi diini ah oo uu dadka ku booriyay Alle ka cabsi iyo in ay muhiim tahay in loo duceeyo dadkeena dhibataysan wanaagana la isku kaalmaysto xumaantana laga dheeraado.
Wacdigii diiniga ahaa ka dib ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay gudomiyaha jaaliyada oo si wanaagsan uga sheekeeyay wax qabadkii Jaaliyada Ogadenia ee labadii sano ee ugu denbeysay. Warbixinta Jaaliyada ayaa gudoomiyaha jaaliyadda si fiican u qaadaa dhigay. Warbixintaa ka dib ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay mic-ga ku xigeenka Hoganka Dhaqalaha mudane Mahamed Yusuf oo dadwaynihii goobta ugu warbixiyay xalada gumaysiga iyo wareerka isku haysta gumaysiga dhaxdiisa isaga oo si fiican u sharxay marxaladihii laga soo gudbay iyo waxa la filan karo mustaqbalka.
Sidoo kale waxa isna shirka kahadlay mudane Rayaale Xaamud oosi kooban uga hadlay tariikhda Ogadenia isaga oo ku daray sheekooyin iyo maahmaaho tusaalyin wax badan lagu garto. Waxaa isna shirka ka soo jeediyay qudbad aad u qiimo badan iskuduwaha jaliyadaha Ogadenia ee qaarada Yurub mudane Cusman Badal oo isna sheegay isku xidhka guud ee Jaliyadaha qarada Yurub iyo wadashaqaynta ka dhaxaysa isaga oo shegay in ay meel wanaagsan marayso loona bahanyahay sidii loo sii xoojinlahaa. Wuxuu Isu-duwaha sawir koban ka bixiyay xalada ay hada ku sugantahay guud ahaan geeska Africa isaga oo sheegay in umadii Somaliyeed si xun loo bahdilay iyaga oo loo adeegsanayo mamulo liita oo u adeega danaha cadowga Somaliyeed.
Waxaa kale oo isna ka mid ahaa masuuliyiintii goobta ka hadashay ku xigeenka Hogaanka Warfafinta mudane Maxamed Cali oo tilmaamay muhiimada ay saxafadu leedahay qarnigan aynu hada ku jiro iyo sida uu cadowgu ugu adeegto saxafadii Soomaliyeed oo aad moodo in ay noqdeen in badan oo ka mid ahi Axmaaro afsomaliga bartay.
Waxa inta uu shirku socday dhaxtaal u ahaa sugaan halgameed aad u wanaagsan oo isugu jirta dhanto ,heeso ,geeraar.iyo gabay oo ay si toos ah u qaadayeen abwanada iyo fananiinta kala ah boqorka dhaantada Maxamud jaangoo, Shugri ilays Hodan Abdi iyo Abwaan Maxamud oo dhamaantood si hagar la,aan ah ugu soo jeediyeen sugaan halgameed aad u qiimo badan goobta shirka.
Guntii iyo gabagabadi waxaa laga jawaabay su,aalo ay waydiiyeen dadwaynuhu masuliyiintii goobta joogtay iyada oo ugu denbayn lagu balamay dadaal iyo sidii loo sii xoojinlahaa halganka xornimo doonka ah ee ay JWXO hormuudka katahay.